Dib-u-warshadaynta Caqli-celinta Maaha Mid Adag: 5 Talooyin Dib-u-warshadaynta - Xarunta EcoTechnology
Recycle Smarter Not Hard: 5 Talooyin Dib-u-warshadaynta
Waan ognahay in dib-u-warshadayntu ay jahwareer noqon karto! Xeerarka ku saabsan dib-u-warshadaynta ayaa si isdaba joog ah isu beddelaya oo isu beddelaya. In balooggan, waxaan ku siin doonnaa xoogaa tilmaamo si fudud loo-raaco ah oo ku saabsan sida dib-u-warshadaynta saxda ah loogu sameeyo Massachusetts. Habka ugu fudud ee lagu ogaan karo haddii shey dib loo cusboonaysiin karo ama uusan ku jirin Massachusetts, waa in la hubiyo Recyclopedia. Kani waa qalab ay soo saareen Dib u warshadayntaSmartMA si looga caawiyo dadka degan inay si fudud u ogaadaan waxyaabaha ka jira gurigooda dib loo cusboonaysiin karo iyo kuwa aan ahayn. Si fudud ku qor shay kasta oo reerka ah oo aad doonayso inaad dib u warshadeyso, Recyclopedia ayaa kuu sheegi doona haddii sheyga dib loo isticmaali karo iyada oo ay la socdaan tilmaamo kasta oo dheeri ah oo aad u baahan tahay inaad si habboon ugu tuurto shaygaas.
Haddii aad ganacsi ku leedahay Massachusetts oo aad danaynayso yaraynta qashinka iyo kordhinta dib-u-warshadaynta, dib-u-isticmaalka, iyo fursadaha soo kabashada cuntada, Dib -u -warshadaynta laga yaabaa inuu ku caawin karo!
Hadda, aan u boodno qaar ka mid ah talooyinka dib-u-warshadaynta waxtarka leh!
Talo # 1: Ka ilaali bacda balaastigga dib-u-warshadaynta
Bacaha balaastigga ah waa sababta 1-aad ee dib-u-warshadaynta qashinka. Xaaladaha badankood, haddii aad u isticmaasho bacaha balaastigga ah boorsadaada dib loo isticmaali karo, dhammaan dib-u-warshadayntaada waxaa loola dhaqmayaa sidii qashin. Sababta bacda balaastigga aan dib loo cusbooneysiin karin ayaa ah in ay ku dhacaan mashiinada xarumaha dib u warshadaynta, taasoo keenta in shaqada la joojiyo shaqaaluhuna ay ku dhaawacmaan. Haddii ay tahay inaad ku rido boorsooyinkaaga dib loo cusboonaysiin karo, hubi inaad faaruqiso waxyaabaha dib loo cusboonaysiin karo ee ku jira gudaha bacda qashinkaaga dhinaca qashinka, halkii aad ku tuuri lahayd bacda oo dhan. In kasta oo bacaha balaastigga ah aan dib loogu cusboonaysiin karin qashinka dib loo warshadeeyo ee agtiisa ah, dukaamo badan oo raashinka lagu iibiyo ayaa awood u leh inay dib u warshadeeyaan, markaa isku day inaad ururiso boorsooyinkaaga oo aad keentid dukaanka raashinka ee deegaankaaga.
Talada # 2: Sababtoo ah waxay leedahay saddex-xagal dib-u-warshadayn macnaheedu maaha in dib loo cusboonaysiin karo
Saddex-xagalka dib-u-warshadayntu wuxuu noqon karaa mid marin habaabin badan. Warshadaha caagagga, saddexagalka u eg calaamadda dib-u-warshadaynta waxaa loo yaqaan ' "Shaabad rinji ah,"furayaa faylka PDF taas oo ah calaamadeyn ay soo saarayaasha balaastiggu adeegsadaan si ay u muujiyaan nooca (yada) caag ah ee shay laga sameeyo. Marka, halka shaabadani ay faa'iido u yeelan karto go'aaminta nooca caag ah ee shay laga sameeyo, haddana si sax ah uma go'aaminayo haddii wax dib loo cusboonaysiin karo iyo in kale.
Talada # 3: Balaastiga madow dib looma isticmaali karo
Bacda madow dib looma isticmaali karo waana in lagu tuuraa qashinka. Sababtuna waa iyada oo aan iftiiminaynin iftiinka, sidaa darteed uma muuqdaan sawir qaadayaashu xarumaha dib-u-warshadaynta. Sidaa darteed, waxay ku dambayn kartaa wasakheynta maaddooyinka kale, sida dhalooyinka quraaradaha, maxaa yeelay si habboon looma kala saarin. Dib-u-warshadaynta caagga madow sidoo kale waxay noqon kartaa mid aad qaali u ah, maxaa yeelay dib ayaa loogu isticmaali karaa oo keliya maaddooyinka kale ee caagga ah ee madow. Aad ayey ugu fududahay soosaarayaasha inay isticmaalaan caag dib loo warshadeeyay oo cadaan ah ama midab leh maxaa yeelay waa la isku qasi karaa si midabyo kale loogu sameeyo alaabada cusub.
Talo # 4: Biyo raaci alaabada dib loo isticmaali karo
Waa caadi in wax yar oo hadhaa ah looga tago waxyaabaha dib loo isticmaali karo, laakiin waxaa muhiim ah in haraaga cuntada inta ugu badan la iska mayro inta ugu macquulsan. Hadhaaga cuntada ee xad-dhaafka ah ayaa soo jiidan kara kuwa wax cunaya oo qaali ka dhigaya dib-u-warshadaynta sababta oo ah ilaha loo baahan yahay in lagu nadiifiyo dib-u-warshadaynta iyo ka saarista cayayaanka. Weelasha ay ka buuxaan walxaha dhegta leh, sida malabka, jelly, ama looska looska, qaado xoogaa ilbiriqsiyo dheeraad ah si aad u siisid xoqid. Alaabada waraaqaha sida sanduuqyada pizza, haddii ay leedahay dhawr dhibic oo dufan ah, dib ayaa loo isticmaali karaa. Marka, iskuday inaad ka takhalusto wixii haraaga cuntada ah ee laga yaabo inay ku harto sanduuqa.
Talo # 5: Yaree, dib u isticmaal, ka dibna dib u warshadeynta
Yaree Dib u isticmaal Dib-u-warshadayn Nidaamkaas saxda ah! In kasta oo dib-u-warshadayntu tahay hab fiican oo wax looga ilaaliyo qashinka, haddana waa inuu noqdaa safkeennii ugu dambeeyay ee difaaca. Habka ugu horeeya uguna wanaagsan ee looga hortagi karo qashinka in uu ku dhamaado qashin qubka waa in la yareeyo baahida loo qabo alaabta laga helayo. Iska yaree tirada waxyaabaha aad isticmaasho adiga oo sameeya xisaab hubin ah waxyaabaha aad iibsato. Go'aanso waxyaabaha aad had iyo jeer isticmaasho, iyo waxyaabaha qashinka ku dhaca. Halkaas, waxaad ka sameyn kartaa go'aanno wax ku iibsan oo aqoon leh mustaqbalka. Kadib yaraynta, iskuday inaad dib u isticmaasho! Fiiri bartayada si aad u fiican dib u adeegsi hal abuur leh fikradaha. Ugu dambeyntiina, wax kasta oo aan hoos loo dhigi karin ama dib loo isticmaali karin dib ayaa loo isticmaali karaa loona rogi karaa wax kale.
Waxaan rajeyneynaa in talooyinkani ay waxtar kuu lahaayeen adiga! Booqo annaga website si aad wax badan uga baratid sida aad u yareyn karto qashinka guriga, oo ay ku jiraan talooyinka loogu talagalay guriga lagu beero.
By Brian Premo|2020-01-29T17:37:34-05:00January 28th, 2020|Education, Recycling, Dib -u -warshadaynta, Sustainability, Weecinta Qashinka|